Maalin: Janaayo 7, 2020
Marxalad cusub oo ku saabsan gaadiidka tagaasida ayaa ka bilaabatay magaalada İzmir. Nidaamka cusub ee tagaasida tagaasida casriga ah ee loo yaqaan 'EnTaksi İzmir girdi' ayaa maanta la galiyay. U dhaqaaqista sidii uu u noqon lahaa magaalo caqli badan, İzmir wuxuu qaaday tallaabo cusub safarka shaqsiyeed. [More ...]
Taariikhda 147 sano ee Tareenka Baqdaad! Professor Edward Mead Earle wuxuu ku qoray buugiisa "1923 Ab" in Abdulhamid II uu ka hor istaagay ajaaniibta in ay wadada maraan. Sida uu sheegayo Professor Earle, II. Abdulhamit, aqoonsiga qaar ka mid ah xuquuqda iyo [More ...]
EGİAD Bridge Bridge wuxuu sii wadaa inuu tusaale u noqdo adduunka ganacsiga. EGİAD - Xubnaha Ururka Ganacsiga Dhallinyarda Aegean, kuwaas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga fiirinayo isku xirnaanta (isku xirnaanta) loo sameeyay aasaasidda iyo ballaarinta [More ...]
Ku-xigeenka CHP Istanbul Mahmut Tanal, TCDD'de "iibka aan joogtada ahayn ee iibka" sheegashada ayaa keenay ajendaha Golaha. Tanal wuxuu weydiistey Wasiirka Gaadiidka Mehmet Cahit Turhan inuu ka jawaabo su'aasha ah "Gawaarida cusub miyaa la jaray oo loo beddelay kuwa duugga ah? Tan. [More ...]
Jannada cad Pamukkale waxaa ku xiga jannada labaad ee cadcad ee magaalada, Xarunta Denizli Ski Center, booqdayaasha booqdayaasha usbuuca dhammaadka. Xarunta Denizli Ski Center, oo ah tan loogu jecel yahay dadka jecel barafka, waxay caan ku tahay ciyaaraha xilliga qaboobaha. [More ...]
Dr. Tahir Büyükakın, Duqa Degmooyinka Degmooyinka Marmara iyo Kocaeli Magaalo-Weyne; Yalçın Eyigün iyo waftigiisa ayaa ka wada hadlay xaalada ugu dambeysa ee Gebze Metro. Gebze Darıca [More ...]
Degmada İzmir ee Magaalaweynta Weyn iyo Open Innovation Association ayaa abaabulaya fikrad marathon ah oo loo yaqaan 11 Hack12Mobility İdeathon İzmir ta 4-10 Janawari. Xilliga kama dambeysta ah ee arjiga ayaa ah XNUMX-ka Janaayo. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxbadan [More ...]
Dowladaha Tajikistan iyo Afghanistan ee Dushanbe Celoleddin Balhi (Kolhozobod) -Cayhun-Nizhny Pyanc-Sherhan Bandar (Afghanistan) ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan dhismaha khadka tareenka. War qoraal ah oo ka soo baxay xarunta warfaafinta ee Wasaaradda Gaadiidka ee Tajikistan, [More ...]
Kaliya mid ka mid ah afarta marxaladood ee garoonka diyaaradaha Istanbul, oo shaqeynaya, ayaa la bixin doonaa sababo la xiriira dammaanad qaadayaal rakaab oo ka mid ah marxaladaha aan furneyn. SözcüSida uu sheegayo wararka Basak Kaya, CHP Kocaeli kuxigeenka Haydar [More ...]